डिस्कोभ्या बनाम ट्रुभडा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी कम्पनी कम्पनी, चेकआउट प्रेस खेलहरु कम्पनी, समाचार कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण स्वास्थ्य औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण भारी खेल
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> डिस्कोभ्या बनाम ट्रुभडा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
डिस्कोभ्या बनाम ट्रुभडा: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
त्यहाँ एचआइभी औषधीहरूको धेरै बिभिन्न प्रकारमध्ये, डेस्कोभी (एम्प्रट्रिटाबाइन / टेनोफोभिर अलाफेनामाइड) र ट्रुवाडा (एम्प्रट्रिबाइन / टेनोफोभिर डिस्कोप्रोक्सिल फ्यूमरेट) दुई एन्टिरिट्रोभाइरल एजेन्टहरू हुन् जुन प्राय: सिफारिस गरिन्छ। धेरै वर्षको लागि, ट्रुवाडा एक मात्र एफडीए-अनुमोदित औषधि थियो प्रि-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (प्रिप) , वा HIV को रोकथाम। जे होस्, अक्टोबर २०१ 2019 मा, डेस्कोभीले पनि प्राप्त गर्‍यो PREP का लागि एफडीए स्वीकृति ।
बिहान क्लेरिटिन र राती बेनाड्रिल
दुबै औषधिहरू गिलियड विज्ञान, इंक द्वारा निर्मित छन् र न्यूक्लियोसाइड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट्स इनहिबिटरहरू (एनआरटीआई) को रूपमा काम गर्दछन्। एचआईभीको नक्कल गर्नका लागि, यसलाई न्यूक्लियोटाइड्स भनिने बिल्डिंग ब्लकबाट डीएनए सिर्जना गर्न आवश्यक छ। ट्रुवाडा र डेस्कोवीले रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट (RT) एन्जाइम रोक्दछ, जसले न्यूक्लियोटाइड्स प्रयोग गर्दछ RNA लाई DNA मा रूपान्तरण गर्नुहोस् । यस तरीकाले, यी औषधिहरूले नयाँ भाइरसहरूको गठन रोक्न मद्दत गर्दछ।
जे होस् दुबै औषधिमा लगभग समान कम्पोनेन्टहरू छन्, तिनीहरूसँग प्रतिकूल प्रभाव, डोज, र स in्केतहरूमा केही भिन्नताहरू छन्।
डेस्कोभी र ट्रुवाडा बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
डेस्कोभी (डेसकोभि भनेको के हो?) एम्प्रट्रिबाइन (एफटीसी) र टेनोफोभिर अलाफेनामाइड (TAF) को संयोजनको ब्रान्ड नाम हो। यो सुरुमा वयस्कहरू र एचआईभी -१ संक्रमण भएका बच्चाहरूको उपचार गर्न २०१ 2015 मा अनुमोदन गरिएको थियो।
डिस्कोभ्यामा TAF छ उच्च प्लाज्मा स्थिरता TruF मा TDF तुलना। नतिजाको रूपमा, TAF एचआईभी संक्रमित कोशिकामा उच्च सांद्रता संग बढी शक्तिशाली छ। डेस्कोभ्य ट्याब्लेटमा २०० मिलीग्राम एफटीसी र २ mg मिलीग्राम टीएएफ हुन्छ।
Truvada (Truvada के हो?) Emtricitabine (FTC) र Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) का ब्रान्ड नाम हो। यी औषधिहरूको संयोजन एफआईडीए - २०० 2004 मा एचआईभी उपचारको लागि अनुमोदित भएको थियो।
डेस्कोभीको तुलनामा, ट्रुवाडाले किडनीको कार्य र हड्डीको घनत्वमा बढी प्रतिकूल प्रभावहरू देखाएको छ। यो टेनोफोभिर प्रोड्रग टीडीएफको उच्च शक्तिमा पनि आउँछ: mg०० मिलीग्राम, २ 250० मिलीग्राम, २०० मिलीग्राम, र १०० मिलीग्राम।
डेस्कोभी र ट्रुवाडा बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्टिरिट्रोभाइरल औषधि
न्यूक्लियोसाइड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट केस इनहिबिटर (NRTI) एन्टिरिट्रोभाइरल औषधि
न्यूक्लियोसाइड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट्स इनहिबिटर (NRTI)
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति कुनै जेनेरिक संस्करण उपलब्ध छैन सामान्य संस्करण अनुमोदन गरिएको छ, तर व्यावसायिक रूपमा अहिले उपलब्ध छैन
जेनेरिक नाम के हो? Emtricitabine / Tenofovir alafenamide Emtricitabine / Tenofovir disoproxil fumarate
मानक खुराक के हो? एच आई भी उपचार: २०० मिलीग्राम FTC / २ mg मिलीग्राम TAF ट्याब्लेट एक पटक खाना संग वा बिना एक पटक
PrEP: 200 मिलीग्राम FTC / 25 मिलीग्राम TAF ट्याब्लेट एक पटक दैनिक खानाको साथ वा बिना एच आई भी उपचार: २०० मिलीग्राम FTC / 300 मिलीग्राम TDF ट्याब्लेट एक पटक खाना संग वा बिना एक पटक
PrEP: २०० मिलीग्राम FTC / 300 मिलीग्राम TDF ट्याब्लेट एक पटक दैनिक खानाको साथ वा बिना
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? एच आई भी संक्रमण वा एड्स को लागी कुनै उपचार छैन। एन्टिरिट्रोभाइरल उपचार भाइरस नियन्त्रण गर्न हरेक दिन लगातार लिनुपर्दछ।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? एच आई भी उपचार: वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु जो कम्तिमा 55 55 एलबीएस तौलका छन्
PrEP: वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु जो कम्तिमा 75 75 lbs तौल गर्छन् एच आई भी उपचार: वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु जो कम्तिमा 35 35 lbs तौल गर्छन्
PrEP: वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु जो कम्तिमा 75 75 lbs तौल गर्छन्
सर्तहरू डेस्कोभी र ट्रुवाडा द्वारा उपचार गरिएको
डेस्कोभी र ट्रुवाडालाई एचआईभी संक्रमणको उपचार अन्य औषधिहरूको साथमा दर्साईएको छ। एचआईभी उपचारको रूपमा प्रयोग गर्दा, डेस्कोभी वा ट्रुवाडा प्रायः टिभिक (डोलुटेग्राभिर) जस्ता इन्टिग्रेज इनहिबिटर वा प्रेजिस्टा (डरुनाविर) जस्ता प्रोटीज अवरोधकको साथ प्रयोग गरिन्छ। डेस्कोभी वा ट्रुवाडा सुस्वा (efavirenz) जस्ता गैर-न्यूक्लियोसाइड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट केस इनहिबिटर (NNRTI) को साथ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
दुस्की र ट्रुभडा दुबै एचआईभी रोकथामको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अन्यथा पूर्व-एक्सपोजर प्रोफेलेक्सिस (PREP) को रूपमा चिनिन्छ। जो एचआईभीको जोखिममा छन्, एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्न डेस्कभो वा ट्रुभडा दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ। एचआईभीको जोखिममा पर्ने व्यक्तिले यौन सक्रिय वयस्कहरू र किशोरावस्थाका साथै IV (इंट्रावेनस) ड्रग प्रयोगकर्ताहरू समावेश गर्दछ।
किनभने यसको PrEP अनुमोदन को लागी डाटा सिजेंडर महिलाहरू समावेश गरेनन्, डेस्कोभी योनी सेक्सको जोखिममा भएकाहरूको लागि प्रयोगको लागि अनुमोदित छैन। डेस्कोभीको ट्रान्स महिला र पुरुषहरूसँग यौन सम्बन्ध राख्ने पुरुषहरूमा प्रिपको लागि अध्ययन गरिएको छ। Truvada यी समान जनसंख्या प्लस IV औषधि प्रयोगकर्ता र विपरीतलिx्गी जोडीहरूमा PREP को लागि अध्ययन गरिएको छ।
सर्त डेस्कोभ्या Truvada
एचआईभी संक्रमण हो हो
एचआईभी रोकथाम (PrEP) हो हो
के डेस्कोभी वा ट्रुवाडा अधिक प्रभावी छ?
दुबै डेस्कोभी र ट्रुवाडा एचआईभी संक्रमणको उपचार र रोकथाममा प्रभावशाली देखाइएको छ। यद्यपि एक नयाँ औषधिको रूपमा, डेस्कोभीलाई गिलियड विज्ञानले सुरक्षित र अधिक प्रभावकारी विकल्पको रूपमा मार्केटिंग गर्दछ। डेस्कको लागि मुख्य तर्क औषधीको एचआईभी संक्रमित कोशिकामा उच्च एकाग्रतामा मिर्गौला र हड्डीको स्वास्थ्यमा न्यूनतम प्रतिक्रियाहरूमा निहित छ।
धेरै क्लिनिकल परीक्षणहरूले देखाए कि TAF छ गैर-अवर TDF लाई एचआईभी संक्रमणको उपचारको लागि। अर्थ, TAF TDF जत्तिकै प्रभावकारी छ। को परीक्षण पत्ता लगाउनुहोस् DEScovy बनाम Truvada पीआरईपी को सुरक्षा र प्रभावकारिता मूल्यांकन एक सक्रिय परीक्षण हो। परीक्षणको नतीजा, जसमा 38,38 participants7 सहभागीहरू थिए, त्यसले देखायो कि डेस्कोभी ट्रुभडामा पनि यस्तै प्रभावकारी थियो किडनीको कार्य र हड्डी खनिज घनत्वमा उल्लेखनीय सुधारको साथ।
यद्यपि धेरै डाक्टरहरू र तिनका सहकर्मीहरू डेस्कोभीलाई प्रिइपीको लागि पहिलो-लाइन विकल्पको रूपमा सिफारिस गर्न हिचकिचाउँछन्। अग्रणी डाक्टर र हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका सहायक प्रोफेसर डा। क्राकोवरका अनुसार सुरक्षा प्रोफाइलमा भएका सुधारहरू त्यस्तो हुन सक्दैन। चिकित्सकीय रूपमा महत्वपूर्ण गिलियड भन्छन्। केही अध्ययनहरूले देखाए कि टेस्कोले डेस्कोभीमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्छ तौल केही बिरामीहरूमा।
उनीहरूको प्रमाणित प्रभावकारिता र सुरक्षाको बावजुद, दुवै डेस्कोभी र ट्रुवाडा मात्र काम गर्दछन् जब तिनीहरू हरेक दिन स्थिर रूपमा लिन्छन्। औषधीको उचित पालना बिना, एचआईभी प्रतिरोधको जोखिम बढ्छ। उत्तम उपचार विकल्प निर्धारण गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग उपलब्ध एचआईभी औषधिहरू छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
कभरेज र लागत तुलना डेसकोभि बनाम ट्रुवाडा
डेस्कोभी र ट्रुभडा भारी मूल्यमा आउँदछन्। कुनै पनि औषधिको लागि औसत खुद्रा लागत $ २००० भन्दा बढी छ। भाग्यवस, यी औषधिहरू प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छन्। बीमा बिना ती लागि, सहायता कार्यक्रमहरू लागत अफसेट मद्दत गर्न उपलब्ध छन्। गिलियड, यी औषधिहरूको निर्माता, यसको आफ्नै प्रस्ताव गर्दछ
मानक खुराक एक ट्याब्लेट (२०० मिलीग्राम FTC / २ mg मिलीग्राम TAF) दैनिक एक ट्याब्लेट (२०० मिलीग्राम FTC / 300 मिलीग्राम TDF) दैनिक
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे । 42– $ 1,807 – 42– $ 1,827
एकलकेयर लागत $ १,8२१ + $ १,871१ +
डेस्कोभी बनाम ट्रुवाडाको साझा साइड इफेक्टहरू
सब भन्दा साधारण डेस्कोभीको दुष्प्रभाव मतली, पखाला, र थकान समावेश गर्दछ। अन्य साइड इफेक्टमा पेट दुखाई वा पेट दर्द साथै टाउको दुख्ने पनि समावेश छ। Truvada उस्तै साइड इफेक्ट पनि पैदा गर्न सक्छ।
डिस्कभर ट्रायलको अनुसार त्रुवडा लिनेहरूले डेसकोभई लिनेहरूको तुलनामा बढी पखाला, मतली, थकान, र पेटमा दर्द महसुस गरे। साइड इफेक्टमा यी भिन्नताहरू, यद्यपि, उपचारमा सार्थक प्रभाव पार्न पर्याप्त ठूलो नहुन सक्छ।
तपाइँ एकै समयमा prilosec र zantac लिन सक्नुहुन्छ
डेस्कोभी र ट्रुवाडाको अधिक गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा दाग वा एलर्जीको अन्य लक्षणहरू समावेश हुन सक्छन्। यी औषधिहरू बिरामी गुर्दा समारोह र हड्डी खनिज घनत्व घटाउने सम्भावना पनि छ।
थकान हो दुई% हो %%
पेट दुख्ने हो दुई% हो %%
टाउको दुखाई हो दुई% हो दुई%
स्रोत: डेलीमेड ( डेस्कोभ्या ), डेलीमेड ( Truvada )
डेस्कोभी बनाम ट्रुवाडाको ड्रग अन्तर्क्रिया
डेस्कोभीले प्रोटीज इनहिबिटरहरू (पीआई), एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, एन्टिमाइकोब्याक्टेरियल एजेन्टहरू, र जडिबुटी उत्पादनहरूको साथ अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। एन्टिरिट्रोभाइरल पीआई जस्तो कि टिप्राणाविरले डेस्कोभीको स्तर र प्रभावकारिता कम गर्न सक्छ। एन्टिकोनवल्सेन्ट्स, एन्टिमाइकोब्याक्टेरियल, र केहि हर्बल औषधिहरू सेन्ट जोन्स Wort डेस्कोभीको प्रभावकारिता पनि घटाउन सक्छ।
ट्रुवाडा प्रोटीज अवरोधकर्ताहरू जस्तै लोपिनवीर, अताजानावीर, र दरुनाविरसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। Truvada संग यी औषधी सेवन ले टेनोफोभिर स्तर बढाउन सक्छ, वृद्धि प्रतिकूल प्रभाव पैदा गर्दछ। ट्रुवाडाले पनि डान्डोसिनसँग अन्तरक्रिया गर्न र यसको सघनता बढाउन सक्छ। डान्डोसिनको स्तर बढ्यो भने यसले अग्निपन्थीयता र न्यूरोपैथी जस्ता प्रतिकूल प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।
दुवै डेस्कोभी र त्रुवाडा हेपाटाइटिस सीको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एन्टिवाइरल ड्रग्ससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन् हार्वोनी (लेर्डिपासवीर / सोफोसबुभेर) जस्तो औषधीले डेस्कोभी वा ट्रुवाडा स्तरलाई असर गर्न सक्छ। परिवर्तन गरिएको औषधि स्तरले प्रभावकारिता कम गर्न वा बढि साइड इफेक्टहरूमा परिणाम दिन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास डेस्कोभ्या Truvada
Tipranavir प्रोटीज अवरोधकर्ताहरू (PIs) हो हो
सोफोसबुइर / वेल्पाटासवीर
सोफोसबुविर / वेल्पाटासवीर / भोक्सिलाप्रेवीर
Ledipasvir / sofosbuvir हेपेटाइटिस सी एंटीवायरल हो हो
Phenytoin एन्टिकोनभल्सेन्ट्स हो हैन
रिफाबुटिन एन्टिमाइकोब्याक्टेरियल एजेन्टहरू हो हैन
सेन्ट जोन्स Wort जडिबुटी हो हैन
डिडानोसिन न्यूक्लियोसाइड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्ट केस इनहिबिटर (NRTI) हैन हो
* अन्य औषधीको कुराकानीको लागि एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवरसँग परामर्श गर्नुहोस्
डेस्कोभी र ट्रुवाडाको चेतावनी
व्यक्ति जो डेस्कोभी वा ट्रुवाडा बन्द गर्छन् अझ खराब हुन सक्छ हेपेटाइटिस बी भाइरस (HBV) संक्रमण । डेसकोभी वा ट्रुवाडा बन्द गरे पछि एचबीभी संक्रमण भएका व्यक्तिहरूमा लिगर फंक्शन निगरानी गर्नुपर्छ। हेपाटाइटिस बी उपचार को पनि यी मामिलाहरु को लागी warranted हुन सक्छ।
किनभने टेनोफोभिर मुख्यतया मिर्गौला मार्फत हटाइएको छ, डेस्कोभी र ट्रुवाडा रेनल कार्य बिगार्न सक्छ। डेस्कोभी र ट्रुवाडाले हड्डी खनिज घनत्व (BMD) लाई पनि असर गर्न सक्छ। किडनी रोग वा अस्टियोपोरोसिसको इतिहास भएकाहरूलाई डेस्कोभी वा ट्रुवाडा प्रयोग गर्दा निगरानी गरिनु पर्छ।
डेस्कोभी र ट्रुवाडा केवल एचईभी-नेगेटिभ पुष्टि भएका व्यक्तिहरूमा मात्र प्रिपीको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। डेसकोभी वा ट्रुवाडा लिँदा एचआइभीको लागि आवधिक परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा, औषधी प्रतिरोधी एचआईभी संकुचनको जोखिम छ, जुन उपचार गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
अन्य सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरूका लागि जोखिमहरूको बारेमा जान्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईको मेडिकल ईतिहास र अन्य औषधिहरूले तपाईले लिने असरले डेस्कोभी वा ट्रुवाडालाई कसरी असर गर्दछ भन्ने कुरालाई असर पार्न सक्छ।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू डेस्कोभी बनाम ट्रुभडाको बारेमा
डेस्कोभी भनेको के हो?
डेस्कोभी एक पटक दैनिक गोली हो जसलाई एचआईभी संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो एचआईभी पूर्व जोखिम प्रोफेलेक्सिस (PrEP) जोखिममा भएकाहरूको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। डेस्कोभिले Emtricitabine (FTC) र Tenofovir alafenamide (TAF) को संयोजन समावेश गर्दछ।
Truvada के हो?
ट्रुवाडा एक एन्टिरिट्रोभाइरल औषधि हो जुन एचआईभी संक्रमणको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो एचआईभी जोखिममा हुनेहरूमा एचआईभी प्रिपका लागि सामान्यतया एक पटकको ट्याब्लेटको रूपमा सिफारिस गरिन्छ। Truvada emtricitabine (FTC) र Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) को संयोजन समावेश गर्दछ
(TDF के हो?)।
के डेस्कोभी र त्रुवडा एकै हुन्?
डेस्कोभी र ट्रुवाडा दुबै गिलियड विज्ञान द्वारा निर्मित छन्। यद्यपि तिनीहरू समान औषधि होइनन्। डेस्कोभी एक नयाँ औषधि हो जसले टेनोफोभिर अलाफेनामाइड (टीएएफ) समावेश गर्दछ। ट्रुवाडामा टेनोफोभिर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट (TDF) हुन्छ।
के डेस्कोभी वा ट्रुवाडा राम्रो छ?
डेस्कोभी र ट्रुवाडा दुबै एचआईभी उपचार र PREP को लागी प्रभावी औषधि हो। डेस्कोभिले मृगौलाको कार्य बिगार्दैन वा हड्डीको घनत्व कम गर्दैन ट्रुवाडा जत्तिकै। यद्यपि ट्रुभडा एक पुरानो औषधि हो र यसका प्रयोगलाई समर्थन गर्न थप डाटा प्रयोग गर्दछ। तपाईंको लागि उत्तम उपचार निर्धारण गर्न डाक्टरसँग यी विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
के म गर्भवती हुँदा डेस्कोभी वा ट्रुवाडा प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि डेस्कोभी वा ट्रुवाडा गर्भमा रहेको बच्चालाई हानिकारक छ। PREP औषधिहरू सुरक्षित र गर्भावस्थाको समयमा सहन सक्छ। जे होस्, यी औषधिहरू मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि लाभ जोखिम बाहिर छ। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ र हाल एन्टिरिट्रोभाइरल औषधि लिनुहुन्छ वा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
के म डेसकोवी वा ट्रुभडा रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
डेस्कोभ्या वा ट्रुवाडा लिँदा रक्सी पिउने सिफारिश हुँदैन। यसो गर्नाले यी औषधिहरूको नकारात्मक प्रभावहरू बढाउन सक्छ जस्तै मतली र टाउको दुखाइ। रक्सीको दुरुपयोग र निर्भरता बढेको जोखिमपूर्ण व्यवहारसँग पनि सम्बन्धित छ जुन उच्च एचआईभी जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
के मैले त्रुवाडाबाट डेस्कोभीमा स्विच गर्नुपर्छ?
डेस्कोभीलाई केहि व्यक्तिहरूमा ट्रुभडाको लागि एक सुरक्षित र प्रभावशाली PREP विकल्प देखाइएको छ। यद्यपि ट्रुभडाबाट डेस्कोभीमा स्विच तपाईंको डाक्टरको विवेकमा छ र उनीहरूको क्लिनिकल निर्णय।
के डेस्कोभी प्रिईपीको लागि अनुमोदित छ?
डेस्कोभीलाई २०१ of को उत्तरार्धमा प्रिईपीको लागि अनुमोदन गरिएको थियो। यो एचआईभीको जोखिममा हुनेहरूलाई एचआईभी रोकथामको लागि एफडीए अनुमोदित गरिएको छ, योनी लिंगका जोखिममा भएकाहरूलाई बाहेक। डेस्कोभ्या समलिay्गी र उभयलिंगी पुरुषका साथै ट्रान्सजेंडर महिलामा प्रिपको लागि अध्ययन गरिएको थियो।
Truvada मिर्गौलामा खराब छ?
Truvada प्रयोग गर्न सक्दछ बिरामी गुर्दा समारोह , विशेष गरी जो किडनीमा क्षतिको लागि संवेदनशील छन्। NfAxs जस्तै सम्भावित मिर्गौला बिगार्न सक्छ जो नेफ्रोटोक्सिक ड्रग्स खाँदा Truvada बाट बच्नु पर्छ। तपाइँको डाक्टरले Truvada सुरु गर्नु अघि तपाइँको मिर्गौला कार्यको परीक्षण गर्न सक्दछ।
निम्न मध्ये कुन एक सामान्य उत्तेजक हो कि अस्थमा को एक ट्रिगर को रूप मा कार्य गर्दछ?
एक सामान्य रक्त समूह हो
अप्रयुक्त पर्ची औषधि संग के गर्ने
मूत्राशय को संक्रमण बाट छुटकारा पाउने प्राकृतिक तरिका
सबै भन्दा राम्रो अवशोषित म्याग्नेशियम पूरक के हो